संखुवासभा घटना: यस्तो प्रमाण फेला परेपछि पक्राउ परे २६ वर्षका युवा, किन सार्वजनिक गरेन ? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/संखुवासभा घटना: यस्तो प्रमाण फेला परेपछि पक्राउ परे २६ वर्षका युवा, किन सार्वजनिक गरेन ?
संखुवासभा घटना: यस्तो प्रमाण फेला परेपछि पक्राउ परे २६ वर्षका युवा, किन सार्वजनिक गरेन ?
काठमाडौ । संखुवासभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर–१ को उम्लिङमा एकै परिवारका ६ जनाको श व फेला परेको घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । केही प्रमाण फेला परेपछि ति ब्यक्ति पक्राउ परेका हुन् । अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण उनको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले र गत लागेको रड कार्की परिवारको घर छेउमै फेला पारेको छ।
चीनलाई अमेरिकाको अर्को चेतावनी
काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने कार्य निरन्तर हुँदै
काठमाडौंमा यो वर्षकै ठूलो वर्षा, भोलिसम्म निरन्तर वर्षा हुने
धादिङ्गमा बिजुली सर्ट हुँदा एउटा गाउँ नै जल्यो, दुईजनाको मृ’त्यु भएको छ भने करिब आधा दर्जन गम्भीर घाइते